यस्तो रहेछ महिलाहरूकाे नितम्ब ठूलो हुनुको अर्थ : पुरा हेर्नुहाेस ! - Taja Khabar
यस्तो रहेछ महिलाहरूकाे नितम्ब ठूलो हुनुको अर्थ : पुरा हेर्नुहाेस !
महिलाहरुमा नितम्ब ठूलो हुनुलाई कामुकतासँग जोडिन्छ । तर नितम्बको सम्बन्ध केवल कामुकतासँग मात्र छैन । वजन ठिक्क भएका तर जिउको अन्य भागको अनुपातमा नितम्बको आकार ठूलो भएका मानिसहरु समग्र स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि भाग्यमानी र सुरक्षित हुन्छन् ।
वजन ठिक्क भएका तर नितम्ब, जाँघ तथा खुट्टामा बढी बोसो भएका मानिसहरुमा हृदयाघात, मधुमेह तथा स्ट्रोक जस्ता समस्याको खतरा कम हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । सेल रिसर्च जनलमा छापिएको अध्ययन अनुसार जिउको तल्लो भागमा बोसो कम हुने मानिसमा हृदयरोग तथा मृत्युको आशंका बढि हुन्छ ।
तर यो नियम मोटोपनाले ग्रस्त मानिसहरुमा लागू हुँदैन । किनकी उनको फोक्सो तथा मुटुको आसपास पहिले नै बोसो जमिसकेको हुन्छ र त्यसले नितम्बमा बोसो जम्मा हुनुको कुनै अर्थ छैन ।
विज्ञका अनुसार नितम्ब र जाँघ भनेको जिउको बोसो सुरक्षित रुपमा तह लगाउने उपयुक्त ठाउँ हुन् । पेटको बोसोको तुलनामा नितम्ब वा जाँघको चर्पी धेरै अर्थमा उपयुक्त हुन्छ । किनकी पेटको बोसोले रगतमा धेरै फ्याट्टी एसिड छाड्दछ । जसका कारण मधुमेह, इन्सुलिन प्रतिरोधक वा कोलेस्ट्रोलको खतरा बढ्दछ । काठमाडौं । तपाईले देख्नुभएको होला धेरैं मानिसहरुले आफ्नो कार्यालय वा कोठामा हात्तिको मुर्ति राखेका हुन्छन । के तपाईलाई थाहाँ छ हात्तिको मुर्ति किन राखिन्छ रु आउँनुहोस आज हामी यसैं विषयमा चर्चा गर्नेछौं । यो विश्वास गरिएको छ कि तपाईले कोठा वा कार्यालयमा हात्तिको मुर्ति राख्नाले तपाईमा भएको नकारात्मक उर्जा भित्र आउँन पाउँदैन ।
तपाई भित्र नकारात्मकत्ता भएन भने कामहरु सफलतापुर्वक सम्पन्न गर्न सकिन्छ । जसले तपाईको मनलाई शान्ति दिन्छ । अर्को मान्यता के छ भने यसरी हात्तिको मुर्ति लगाउँनाले दम्पतीका विचमा प्रेम गहिरो हुन्छ । परिवारमा कहिल्लै पनि झैंझगडा जस्ता कुराहरु हुँदैनन तपाईका सन्तान आज्ञाकारी हुन्छन भन्ने पनि पुरानो विश्वास रहँदै आएको छ । एजेन्सी
संगै जिउने संगै मर्ने बाचा पुरा, श्रिमानको मृत्यु भएको दुई घण्टापछि श्रीमतीको पनि मृत्यु
हामी दमाई, कामी त बैज्ञानिक इन्जिनियर हौँ, अछुत त तिम्रो ब्राह्मणवाद हो…. अवश्य पढ्नुहोला
दसैंमा मासु : थोरै खाए प्रोटिन, धेरै खाए दुर्दिन , पशुको टाउको, आन्द्राभुँडी र रक्ति…
100 % किड्नी बिगार्ने मानिसको एउटा यस्तो बानि : समयमै जानकारी लिनुहोस अनि किड्नी…
रात भरी मनमा कुरा खेली रहने तर निद्रा लागेन भने यसो गर्नुहोस, मस्त सुत्न सकिने